कसरी बरफ मा एक skater आकर्षित गर्न? हामी प्रश्नको जवाफ थाहा!
यसको मूल स्केटिङ फिर्ता लिन्छ कांस्य आयु। यो पशु हड्डी बनेको पहिलो स्केट्स रहन्छ कि त थियो। आधिकारिक, संख्या स्केटिङ XIX सताब्दी को 60s मा चिनिन थाले। बिस्तारै, खेल गति प्राप्त गरेको छ। प्रशंसकको थुप्रैले हरेक वर्ष देख्न सकिन्छ। र यो जायज छ: रंगीन वेशभूषा, मनोरम आन्दोलनहरु र मनोरम twists - यी सबै Delights दुवै बच्चाहरु र वयस्क। जवान पुस्ता झन् भएको छ आकर्षक महिला खेलाडीहरूलाई आफ्नो तस्बिरमा फोटो, त्यसैले अब हामी बरफ मा एक skater आकर्षित गर्ने बारे कुरा हुनेछ। यो गर्न सजिलो छैन रूपमा, रोगी हुन।
निस्सन्देह, तस्वीर सिर्जना गर्न "बरफ मा चित्रा skater," विभिन्न सामाग्री आवश्यक छ। हामी कागज, एक पेन्सिल, एक रबड, crayons, मार्कर वा रंग को एक टुक्रा आवश्यक छ। विचार - सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बारे मा भूल छैन। एक तस्वीर, रेखाचित्र वा आफ्नो कल्पना लिन आधार हुन सक्छ। आफ्नो सर्वश्रेष्ठ सहायक - सफलता बाटोमा सरस्वती, प्रेरणाको लागि गुमाउन छैन।
अब तपाईंको आँखा अघि इच्छित वस्तु देखियो। यो सबै अन्वेषण गर्न धेरै सानो विवरण आवश्यक छ: वातावरण अनुरूप पुऱ्याउन। जो बिना यो कुनै एक skater गर्न सक्नुहुन्न, सुरु गर्न बरफ आकर्षित। यसलाई बन्द रिङ्क छ भने, यो प्रशंसक को एक विशाल संख्या संग Bumpers, प्रकाश र bleachers आकर्षित गर्न आवश्यक छ। शायद यो एक स्थिर ताल वा नदी हुनेछ? यो बादल मडारिरहेको संकेत र परिदृश्य (रूखहरू, सूर्य को स्थिति, छाया) विचार गर्न आवश्यक छ।
अब यसलाई ठूलो प्रश्न सोध्न समय: "कसरी गर्न एक skater आकर्षित ? बरफ मा" यसो गर्न, तपाईं पानामा र यसलाई लिन्छ भन्ने स्थिति मा आफ्नो खेलाडीहरूलाई को स्थिति निर्धारण हुनुपर्छ (यो सही ढंगमा हतियार, खुट्टा, शरीर र टाउको झुकाव को स्थान प्रतिनिधित्व गर्न महत्त्वपूर्ण छ)। अब, पातलो रेखा हातमा, खुट्टा र शरीर bends को स्थान जनाउँछ। यो चरण मा, आफ्नो रेखाचित्र गुणात्मक स्केच प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।
अब, तपाईंको स्केच राम्रो मस्यौदा प्रतिस्थापन गरौं। टाउको देखि सुरु र बिस्तारै कम र तल्लो डूब शरीर को सबै भागहरु, कोर्नुहोस्। अक्सर टाउको, हतियार, खुट्टा, मुर्कुट्टा ovals प्रतिस्थापन, गोठभित्र - सर्कल। कसरी अर्को बरफ मा एक skater आकर्षित गर्न? ओदेन खेलाडी, घोडाहरू चित्रण। अर्को, लुगाहरू कुरा गरौं। सामान्यतया, skaters खेल जर्सी लगाउने र यी वेशभूषा मूल डिजाइन र चम्केको वस्तुहरू द्वारा विशेषता हो, आफैलाई तपाईंको सम्पूर्ण कल्पना गर्न फेंक। यो कपाल मा काम गर्ने समय छ। यहाँ पनि, यसको आफ्नै nuances छ। केश ड्राइभिङ हस्तक्षेप हुँदैन, त्यसैले एक बन्डल वा चुल्ठो तस्बिर। Sotrom सबै अनावश्यक रेखाहरू। फेरि ध्यान दिएर सबै काम, एक नजर ले जनाउँछ बेपत्ता भागहरु: expressive आँखा, मुख, नाक, कान, सिउनी रेखा र यति मा (eyebrows र परेलाहरु को लाइन भूल छैन)।
हामी रंग मा बरफ मा एक skater आकर्षित गर्ने बारे कुरा गर्न आवश्यक छ। तपाईं कलाकारहरूको सिफारिसहरू पालन भने, पहिलो, चित्रित पृष्ठभूमि त पछि अनुहार छाया छानिएन - लुगा, र मात्र पछि तपाईं अन्य सबै वस्तुहरू गर्न रंग थप्न सक्नुहुन्छ। जहाँ तपाईं सबैलाई अलग संसारको देख्नुहुन्छ, र विशेष रंग मा विशेष क्षणमा किनभने, कुनै पनि सामान्य सल्लाह छैन। यो लागि रंग को अनुकूलता जाँच दुई मीटर को दूरी मा दर्पण जानुहोस् र तपाईंले आफ्नो कृति मा एक "flashy" स्पट हेर्न भने, ऐनामा एक नजर छ, यो तिनीहरूलाई हटाउन सबै भन्दा राम्रो छ। तपाईं परिणाम संग खुसी छन् कि निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक छ भने, चित्र समायोजन गर्नुहोस्। कृति तयार छ!
आकर्षित बरफ मा एक आंकडा skater पनि गाह्रो छैन। मुख्य कुरा - आफ्नो लक्ष्य जानुहोस् र तपाईं बाहिर आउँछन् कुरा छ भने निराश गर्न छ। सफल तपाईं कला!
लोक कला को इतिहास: को यूराल-साइबेरियन चित्रकला
मूर्तिहरु र कलाकार Mihail Osipovich Mikeshin: जीवनी, रचनात्मक र रोचक तथ्य विशेषताहरु
कसरी स्पाइडर पेन्सिल आकर्षित गर्न? धेरै तरिका मा चरण नजर द्वारा चरण
20 औं शताब्दीमा पेन्टिङ मा अग्र-दल: प्रतिनिधिको उदाहरण
नयाँ वर्ष कर्पोरेट लागि सबै भन्दा राम्रो विचार
सेन्ट पीटर्सबर्ग र ताई बारेमा अन्य प्रश्नहरू देखि थाईल्याण्ड कसरी उड गर्न
Raspberries संग चार्लोट: फोटो संग नुस्खा
"तपाईंले कहिल्यै सपना देखाउनुभएन": अभिनेताहरू र अहिले
Espumizan: प्रयोगको लागि निर्देशन
Salou आकर्षण: पार्क, फोहराहरू। फोटो र समीक्षा
Vyacheslav Mironov: युद्ध को बारे मा पुस्तकहरु
प्राविधिक नक्सा। तयारीको र डिजाइन को लागि सामान्य नियम
एस्पिरिन: contraindications, भर्ना र साइड इफेक्ट को नियम